The UN has Zero Tolerance to sexual exploitation and abuse. Preventing and addressing sexual harassment and abuse of authority remainsapriority for the whole UN system.
Allow me please to share with youavideo message on the topic from the Secretary-General,aFact Sheet on UN’s initiatives andaglobal Quarterly Update on reported allegations of sexual exploitation and abuse.
Zero Tolerance on Sexual Exploitation & Abuse - UN Secretary- General Video Message:
Fact sheet on the Secretary-General’s initiatives to prevent and respond to sexual exploitation and abuse:
Quarterly Update on reported allegations of sexual exploitation and abuse:
I’m also forwarding you our message from 17 August 2018 with the contact details for reporting mechanisms in Myanmar.
ကုလသမဂ္ဂသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် အနိုင်အထက်ပြုမှုများကို လုံးဝ လက်သင့်မခံပါ။ ကာယိနြေ္ဒပျက်ပြားစေမှု နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အလွဲသုံးစားပြုမှုတို့ကို တားဆီးကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခြင်း သည် ကုလသမဂ္ဂစနစ် တစ်ခုလုံး၏ ဦးစားပေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ရုပ်သံသတင်းစကား၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ ဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအချက်အလက်အချုပ်နှင့် ကမ္ဘာအ၀ှမ်းမှ အစီရင်ခံလာသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် အနိုင်အထက်ပြုမှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များအပေါ် သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ် အစီရင်ခံစာ တို့ကို မျှဝေလိုက်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် အနိုင်အထက်ပြုမှုများအပေါ် လုံးဝလက်သင့်မခံကြောင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် အနိုင်အထက်ပြုမှုများကို ကာကွယ်တားဆီးတုန့်ပြန်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအချက်အလက်အချုပ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အစီရင်ခံလာသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် အနိုင်အထက်ပြုမှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များအပေါ် သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ် အစီရင်ခံစာ။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစီရင်ခံရေးယန္တယား၏ အသေးစိတ် အဆက်အသွယ်များပါဝင်သည့် ကျွန်တော်၏ အမှာစကားကိုလည်း ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါသည်။
Copy of the message 17 August 2018 (Myanmar language below):
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောင့်ယှက်မှုနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအလွဲသုံးစားပြုတို့မှ တားဆီးကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ခြင်းသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဟန်ချက်ညီ၍သဟဇာတဖြစ်သော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရေးနှင့် မိမိတို့၏ဝန်ထမ်းများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဖိအားပေးမှုနှင့် တားမြစ်ထားသည့်အပြုအမူတို့မှ အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် သင့်လျှော်သည့်အစီအမံများ လုပ်ဆောင် ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအားလုံးတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ တားမြစ်ထားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြား လာပါက တရားမျှတပြီး ဘက်လိုက်ခြင်းကင်းစွာဖြင့် ချက်ခြင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် မန်နေဂျာများနှင့် ကြီးကြပ်သူများ တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများအား တိုင်ကြားနိုင်ရန် နှင့် အဆိုပါတိုင်ကြားမှုများကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအတွင်း တရား မျှတပြီး လျှို့ဝှက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်စနစ်တစ်ခု ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးအတွက် အောက်ပါအချက်များ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် ၀န်ထမ်းအားလုံးကို တိုက်တွန်းလိုပါသည် -
၁။ ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းအားလုံးသည် စော်ကားနှောင့်ယှက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောင့်ယှက်မှုနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတို့မှကင်းဝေးသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့် ရေရှည်တည်တန့်စေရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပိုမိုသိရှိစေရန်အတွက် (ST/SGB/2005/20 ပါပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စော်ကားနှောင့်ယှက်မှု၊ ကာယိနြေ္ဒ ပျက်ပြားစေမှုနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအလွဲသုံးစားပြုမှုတို့ တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းသင်တန်းအစီအစဉ်ကို မဖြစ်မနေ တက်ရောက်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် အလွဲသုံးစားပြုမှုများမှ အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါး နှောက်ယှက်မှု အပါအ၀င် စော်ကားနှောင့်ယှက်မှုများအား ပြင်းထန်စွာအရေးယူသည့်မူဝါဒကို သိရှိလိုက်နာ ကျင့်သုံးစေရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အခြားသောပုံစံများဖြင့် စော်ကားနှောင့်ယှက်မှုများအကြောင်း သင်တန်းများပေးရန်နှင့် ထိုအမှုကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် သတင်းပို့ တိုင်ကြားနိုင်သည့်စနစ်များ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် ထားရှိရေးတိုက်တွန်းသင့်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အရေးကြီးလှသော ကိစ္စရပ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်အလေးထားအာရုံပြုဆောင်ရွက်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါကြောင်း ထပ်မံပြောကြားလိုပါသည်။